Izilwanyana ezithandwayo ngokufudumalayo: ukuthabatha inyoka njengezilwanyana ezifuywayo kwiindawo zokuhlala
Ukulima inyoka kuthetha ukuthwala uxanduva olulodwa
Iinyoka zivame ukudala ukuphendula okuhlukeneyo kubantu: ukunyaniseka okanye ukuthakazelisa. Abo bantu banomdla ngobabalo benyoka abanakuze baneliseke xa izilwanyana ezingenamthetho zikwazi ukuhamba, kuphela ngokuhambisa izikali zabo zesisu.
Izilwanyana ezithandwayo ngokufudumalayo: ukuthakazeliswa neenyoka kwiindawo zokuhlala
Emva koko bahlasele malunga nokuqala okuthile kwezilwanyana.
Iinyoka, zicaca kuwo wonke umntu, kungekhona ezifuywayo eziqhelekileyo. Sekunjalo ngesondlo kubonisa ukuba inyoka kufuneka igcinwe ngokuhlukileyo kunomzekelo we-hamsters, ihagu zeginea kunye noonogwaja obunzima.
Izibetha zidla kuphela izilwanyana eziphilayo. Nangona ukutya akusekho, umzekelo, ukulawulwa kwezintshontsho zentsuku zentsuku okanye iintsana ezincinci ezinomdla we-mouse ngumgaqo wezinja ezithile. Kuhluke kakhulu kunokuba kuqhelekileyo ngokwemizalwane eqhelekileyo yokuzaliswa, engadliwa ngesimo sepellets okanye izitya zeplastiki.
Ukugcinwa kwenyoka ngokuqhelekileyo kunzima kunzima kwaye kunexabiso ngaphezu kwesimo sengxowa yeginea. Kukho neendleko eziphezulu kakhulu, z. B. kwiindleko zombane kwisibane sokushisa (mhlawumbi kunye nokufudumala umthamo) kunye nokutya okubi kakhulu kunye.
Inyoka eluhlaza kwi-terrarium
Umgcini we-snake ophetheyo unika izilwanyana zakhe iimeko ezifanelekileyo zokuhlala kwi-terrarium.
Kubalulekile ukuba i-terrarium yenyoka ye-snake ishintshiwe, kuba akuyiyo yonke inyoka inokuziva ikhululekile kwindawo efanayo. Izinyoka ezihlala emhlabathini kufuneka zibe neendawo ezininzi, ngelixa iintlanzi zemithi ziziva zikhululekile kwiindawo zokuhlala eziqhele ukuphakama ngaphezu kobubanzi.
Ukujonga ubusuku ngobusuku, kunengqiqo ukuba nesibane esinokukhanya okubomvu okanye kwi-terrarium, ngenxa yokuba inyoka ayinakuqonda ukukhanya kulo mbala kwaye awuyi kuphazamiseka ngabantu.
Njengomgcini we-snake elizayo kufuneka aqinisekise kwakhona ukuba i-terrarium ifanelekile umoya. Ukuphuza umoya okhoyo kunokufezwa ngeteksi yetsimbi okanye i-plastic gauze, ukukhusela iindawo zokungenisa umoya. Iimeko ezifanelekileyo zokuphucula umoya zicinga ukuba kufakwe ukuvulelwa kwezimbini zokuvula umoya. Kwelinye icala kwicala eliphantsi, kwicala elingaphandle kwindawo ephezulu.
Ininzi yeentlobo zeenyoka zifuna indawo yokufihla ukuba ithathe umhlala phantsi ixesha lokuphumla. Ngokuxhomekeka kwintlobo yeenyoka, izixhobo ezifanelekileyo zokukhuphuka, indawo yokufudumala kwelanga kunye nomthombo wokunisela, ongasetyenziselwa yinyoka njengeendawo zokuhlamba, nazo zikwindawo efanelekileyo.
Nabani na ofuna ukugcina imigca ewela kwiindidi "inetyhefu" kunye / okanye "ngaphezu kwee-mitha ze-3 ngobukhulu" kufuneka ivunywe yi-ofisi yolawulo oluntu. Xa ujongana nenyoka enetyhefu, kukwacetyiswa kwakhona ukuba ube ne-counter-serum ephumelelayo endlwini ukuze ukwazi ukuthatha amanyathelo ngexesha lokuluma.
Utywala nje nge-aphrodisiac - erotic
Toxoplasmosis | Iilwanyana zezilwanyana zempilo